Wasiirka Gaashandhiga dalka Turkiga oo booqday xerada tabarka Turkiga ee magaalada Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaWasiirka Gaashandhiga dalka Turkiga oo booqday xerada tabarka Turkiga ee magaalada Muqdisho
Wasiirka Gaashandhiga dalka Turkiga oo booqday xerada tabarka Turkiga ee magaalada Muqdisho
08/11/2018 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Dibada, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Wasiirka gaashaandhigga Turkiga Khalusi Akar iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa maanta booqasho ku tagay saldhigga ciidanka ee uu Turkigu ku leeyahay magaalada Muqdisho.
Wasiirka oo ay wehliyaan taliyeyaasha ciidamada cirka iyo badda oo tan iyo shalay booqasho ku joogay magaalada Muqdisho ayaa wadahadallo la yeeshay madaxda iyo saraakiisha sarsare ee dowladda.
Booqashada uu wasiirka maanta ku tagay saldhigga ciidanka ee uu Turkigu ku leeyahay magaalada Muqdisho waxaa ku wehlinaayey dhigiisa, Xasan Cali Maxamed (Amar Dambe) wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya.
Wasiirka ayaa saldhigga si diirran loogu soo dhooweyay isaga oo salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamo dhoolla tus ku sameeyey saldhigga wuxuxuuna warbixin la xiriirta halka ay marayaan howlaha saldhigga ka dhageystay saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Turkiga ah ee maamula saldhigga.
Wasiir Akar ayaa socod ku soo dhex maray laamaha kala geddisan ee uu ka koobanyahay saldhigga wuxuuna ciidamada iyo saraakiishaba uga mahadceliyay shaqada wacan ee ay hayaan wuxuuna kula dardaarmay inay halkaa kasii wadaan meel marinta howlaha culus ee loo igmaday oo qeyb weyn ka ah xasilloonida iyo nabad kusoo dabaalidda Soomaaliya.
Dabayaaqadii sanadkii hore ayay ahayd markii ra’isal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wasiirka oo xilligaasi ahaa taliyaha guud ee ciidamada Turkiga ay si wadajir ah xariga uga jareen furitaankii saldhiggan.
Dowladda Soomaaliya ayaa gacan saar wanaagsan oo saaxiibtinnimo la leh dalka Turkiga oo fuliya tababarrada ciidamada, fulinta mashaariicda dib u dhiska iyo howlaha gargaarka bani adaannimo ee uu ka fuliyo Soomaaliya kuwaa oo aan marnaba hakad gelin sideeddii sano ee u dambeysay.
Soomaaliya oo kasoo kabaneysa colaadihii daashaday in ka badan rubuc qarni ayaa dib ugu soo noqotay masraxa dunida iyada oo dowladaha cududda waaweyn ay u arkaan inay tahay mid lagama maarmaan u ah inay qeyb ka ahaato istiraatiijiyadaha kala duwan ee dalalka dhaca Geeska Afrika.
AKHRISO:- Sharciyada laga soo saaray koobka lagu qaban doono xafada Bundoweyn ee magaalada Beledweyne
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle oo lagu dilay magaalada Muqdisho